Fiaran-dalamby roa tany Bangladesh: Maty 15, naratra 58 | RayHaber
HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA880 BangladeshFiaran-dalamby roa tany Bangladesh: Maty 15, naratra 58
13 / 11 / 2019 880 Bangladesh, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Headline, VIDEO
Aoka ny naratra dia fifandonan'ny planeta roa lamasinina ao Bangladesh
Fiaran-dalamby roa tany Bangladesh: maty 15, naratra 58; Laharana 03.00 tamin'ny ora tao an-toerana omaly alina tany Bangladesh, ny fiaran-dalamby mandeha niala ny tanànan'i Chittagong any Brahmanbaria, atsinanan'i Dhaka, nifandona tamina fiaran-dalamby hafa avy tamina lalana mifanohitra, olona 15 no maty ary naratra ny olona 58.
Nifindra niala tao Sylhet ka hatrany Chittagong, nandalo ny garan-dalamby tao amin'ny tanàna Kosba ka nankany amin'ny garan'i Mondovag ny lamasinina. Ilay fiaran-dalamby mpandeha hafa avy any Chittagong mankany Dhaka dia nandeha an-tongotra nankany amin'ny gara Mondovag. Ny kitapo fanaraha-maso dia nangatahin'ny lamasinina hamakivaky ny lalamby hafa ary hijanona ao. Na izany aza, tsy nanaraka ny torolàlana ny lamasinina avy any Chittagong. Minitra vitsy taty aoriana dia nifandona tamin'ny lamasinina avy any Sylhet ny lamasinina avy any Chittagong.
Taorian'ny loza dia nisy olona 15 novonoina ary farafaharatsiny olona 58 no naratra. Ireo mpandeha naratra dia nentina tany amin'ny Hopitaly Kosba, ny havan'ireo niharam-boina izay nitomany tao amin'ny faritra no niandry vaovao mahafaly avy amin'ireo manampahefana. Bangladesh Railway dia nilaza fa mety hitombo ny isan'ny maty.
Ny lehiben'ny polisy ao amin'ny faritra Anisur Rahman dia nitatitra ny fanadihadiana momba ilay loza.
Trano roa no nifamotoana tany Soisa! 30 naratra
Fiarandalamby roa nifandona tao Aotrisy, 4 naratra mafy 20
Fiarandalamby roa novonoina tao Peruda 23 naratra
Fiaran-dalamby roa tany Italia: naratra 50
Fiaran-dalamby amin'ny fiakarana amin'ny ambaratonga iray any Tarsus
Fiaran-dalamby Ejipsiana nianjera mpiasa miasa 9 maty